“जनतासँग नजिकिएर काम गर्ने अवसर मिल्यो” « News of Nepal
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ ले उपप्रमुखलाई स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको मुख्य जिम्मेवारी दिएको छ। योसँगै उपप्रमुखलाई अनुगमन समितिको जिम्मेवारीसमेत रहेको छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी लिएपछि स्थानीय तहमा अहिले कामको चाप बढेको छ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा स्रोत साधन र जनशक्तिका हिसाबले अब्बल मानिन्छ। बेनी नगरपालिका प्राकृतिक स्रोत साधनका साथै धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, कला, संस्कृति र पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा पनि धनी छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हालसम्म बेनी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका योजनाहरू, महिलासम्बन्धी गतिविधि तथा कार्यक्रम, गौरवका योजनाहरू के–के छन् ? यिनै विषयमा आधारित रहेर बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख सञ्जु बरुवालसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि म्याग्दी संवाददाता
प्रताप बानियाँले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
तपाईंले बेनी नगरपालिकाको उपप्रमुख भएपछि के–कस्ता कार्य सम्पादन गर्नुभयो ?
नगरबासीको इच्छा, चाहना तथा आवश्यकताअनुसारका योजनाहरू बनाउने कामलाई नै मुख्यरूपमा जोड दियौं। संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कदर गर्दै नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाएर लागू गरेका छौं। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले उपप्रमुखलाई दिएको जिम्मेवारीअन्तर्गत ५ वटा विषयगत समितिको संयोजक र ९ वटा विभिन्न समितिमा सदस्यको भूमिकामा रही काम गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुँदा सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने गरिएको छ।
अहिलेसम्म न्यायिक समितिमार्फत कतिवटा मुद्दा मिलाउनुभयो वा न्याय सम्पादन गर्नुभयो त ?
न्यायिक समितिको स्थापना भई कार्यसम्पादन शुरू गरेदेखि हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका ४७ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा आएको हुँदा त्यसमध्ये अधिकांश मुद्दाको किनारा लगाइएको छ। यसमध्ये दुवै पक्षलाई राखेर आवश्यक सल्लाह सुझावसहित मिलापत्र गरी सहज वातावरण निर्माण गरिएको छ।
नमुना नगरपालिका बनाउने योजनाबारे केही सोच्नुभएको छ ?
बेनी नगरपालिका आफैंमा नमुना छ र यसलाई अझै नमुना बनाउनका लागि हामीले नगरपालिकामार्फत सबै वडामा पुग्ने गरी रिङरोडको अवधारणा अगाडि सारेका छौं। यस नगरपालिकाभित्र रहेका धार्मिक, पर्यटकीय र ऐतिहासिक क्षेत्रहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ। नगरपालिकाको सबै वडाका सडकलाई स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्ने, विकासे योजनाहरूलाई दिगोपन दिनका लागि डीपीआर तयार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सर्वप्रथम त मलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईं र नेपाल समाचारपत्रलाई धेरै–धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि हामी नगरपालिकाको विकासमा केन्द्रित भएर लाग्ने नै छौं। बेनी नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन आम नगरबासी सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ। यसका लागि हामी सबैसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नेछौं। अन्त्यमा, मेरो अन्तरवार्ता पढेर रचनात्मक सल्लाह, सुझाव दिनुहोला भन्ने अपेक्षा गर्दछु।